I-Dompet Kecil Apk Khuphela ye-Android -Luso Gamer
Akukho mntu unokuphila ubomi ngaphandle kokuphumeza iimfuno zakhe ezisisiseko kodwa ngamanye amaxesha siyasilela imali yokuphila ubomi obulula okanye ukuqala naliphi na ishishini.
Kodwa namhlanje ndize ne Inkqubo yokubolekisa oko kuya kunceda abasebenzisi ukuba bafumane imali-mboleko yokuseka ishishini elitsha nelincinci okanye banokuthenga izinto zabo eziyimfuneko. Yi "Dompet Kecil Apk" esiSicelo saseIndonesia.
Yintoni uDompet Kecil
Igama le-App likulwimi lwaseIndonesia oluthetha i-Wallet encinci. Esi sicelo sisekwe kwinkampani yetekhnoloji yezezimali ejonge ukubonelela ngeenkonzo zezezimali kwabo bantu basweleyo.
Ke ngoko, ukwenza ufikeleleke ngokulula ngakumbi esi sicelo senziwe ukuze abantu bafumane ngokulula zonke iinkonzo kwiifowuni zabo.
Akukho ngxaki zokufumana imali mboleko kunye nezinye iinkonzo ngokubhekisele kubanini bakho ekufuneka ubenazo kuphela iinombolo zezazisi ukuze ubole imali.
Nangona kunjalo, kukho into enye ebalulekileyo ekufuneka uyigcine engqondweni yakho ukuba esi sicelo sikhona kuphela kubasebenzisi base-Indonesia. Kungenxa yokuba yinkampani esekwe kwilizwe kwaye okwangoku ayikayenzi imisebenzi yayo kwamanye amazwe.
igama UDompet Kecil
ubungakanani 28.25 MB
Igama lepakheji com.felixtech.kekayaan
udidi apps - ishishini
Indlela yokuBhalisa Dompet Kecil?
Ngaphambi kokufumana inkxaso yemali kwinkampani kuya kufuneka ufumane irejista kwi-app yabo. ke apha ngezantsi, ndikunike indlela yobhaliso ke nceda ulandele onke amanyathelo ngenyameko.
Okokuqala, kuya kufuneka ukhuphele i-App kwiwebhusayithi yethu.
Emva koko uyifake kwiifowuni eziphathwayo ze-Android.
Ngoku zalisa ifomu apho uya kucelwa ukuba ubonelele ngedatha yakho, inombolo yeselfowuni, kunye nenye idatha ebalulekileyo.
Ngoku qinisekisa iakhawunti.
Ngoku faka isicelo semali mboleko.
Apha ngezantsi, ndabelana ngeempawu eziphambili ze-Dompet Kecil Apk ye-Android. Ke, zizinto ezo oya kuzifumana kwesi sicelo kunye nenkampani. Ndiyakucebisa ukuba uzifunde zonke ezi mpawu ubuncinci kube kanye ngaphambi kokukhuphela i-App.
Oku kunikezela ukuba wenze ungqinisiso olukhawulezayo kunye nekhredithi ekhawulezayo.
Ukunika imali mboleko ngexabiso eliphantsi lenzala.
Ungajonga kwaye ubala ukufakelwa, iindleko, kunye nesixa semali ngaphambi kokuba uboleke.
Ungabhatala iindleko ngeefowuni zakho ezikhawulezayo nezilula.
Ikuvumela ukuba uhlengahlengise imigaqo-mboleko kunye nemida.
Unokuhlawula neendleko zesibhedlele.
Ukubonelela ukuba ufumane intlawulo yamakhadi akho etyala.
Kwaye zininzi ezinye ukufumana izibonelelo.
Uyifaka njani i-Dompet Kecil Apk?
Kukho amanyathelo ambalwa apho unokufaka ngokulula ifayile ye-Apk yesicelo se-Kecil kwiifowuni zakho ze-Android. Ke, landela la manyathelo anikwe ngononophelo.
Khuphela ifayile ye-Apk yamva kweli nqaku.
Yiya kukhetho lokuseta iselfowuni yakho ye-Android.
Emva koko vula ukhetho loKhuseleko.
Ngoku yenza imithombo engaziwayo.
Buyela kwisikrini sasekhaya se-smartphone yakho.
Vula iFayile Explorer kwaye ufumane ifolda apho uyikhuphele khona ifayile.
Xa ufumana ifayile ye-Apk kwifowulda yefolda okanye ucofe kuyo.
Ngoku khetha ukhetho lokufaka.
Lindela imizuzwana embalwa.
Uyenzile ngoku kwaye ungasebenzisa iApp ukuboleka imali.
Njengoko sele nditshilo ukuba olu setyenziso luhambelana kuphela nezixhobo ozisebenzisayo eIndonesia. Ke ngoko, ukuba abantu abavela kwamanye amazwe bezama ukuyisebenzisa kwiifowuni zabo ayizukubasebenzela.
Ukuba usifanele isicelo, fumana ifayile ye-Apk apha kwaye uyifake kwifowuni yakho. Ukukhuphela uguqulelo lwakamva nje lweDompet Kecil Apk kwiifowuni zakho zeefowuni eziphathwayo, cofa apha ngezantsi iqhosha lokukhuphela.
Yabelana nabahlobo bakho: Phambi kokuya kwiDawunlowudi App ndifuna nje nina bafana ukuba niyayithanda, nceda ke nihlanganyele lePosti / inqaku nabahlobo bakho kunye nabanye osebenza nabo.
iindidi ishishini, apps tags UDompet Kecil, UDompet Kecil Apk, Uhlelo lweDompet Kecil, Inkqubo yokubolekisa Post yokukhangela
I-OLA Tv Pro yokukhuphela i-apk ye-Android [ihlaziywe ngo-2022]